.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: မိမိ Web Site ကို မြန်ဆန်စေမည့် နည်းလမ်းများ
မိမိ Web Site ကို မြန်ဆန်စေမည့် နည်းလမ်းများ
ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုဒ် ထောင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီစာအုပ်လေးက ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို လျင် မြန်လာအောင်
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်း မြောက်မြားစွာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး
သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ပါပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ
ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းကတော့ http://www.mmshare.org/ ကပါ။
Download: How to Speed Up Our Websites
̏ မိမိ Webpage ကို မြန်မြန် ပွင့်စေချင်လျှင်˝
မိမိ Webpage ကို မြန်မြန်ပွင့်စေချင်လျှင် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကိုလည်း http://zaung.net/ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Thurainlin at 08:54
Labels: Blog, Ebook, နည်းပညာ